Usizo esikoleni saseMaoti | Angel Projects
Usizo esikoleni saseMaoti
Sihlomule ngamakhompyutha angu-50 isikole samabanga aphansi esiseMaoti,iZwakele anikelwe yinkampani yobuchwepheshe I Adapt IT. Lesi sikole sakhelwe isikhungo sokufundela izifundo zobuchwepheshe yile nkampani esethulwe bgokusemthethweni ngoLwesibili. Phezu kwalawa makhompyutha angu-50,iZwakele ihlinzekwe nge-internet,ifenisha entsha okufaka amadeski nezihlalo, i-air condictioner namakhethini kwaphinde kwapendwa kabusha ikilasi lapho kuzofundelwa khona. Abanye othisha bakulesi sikole bazokwenza izifundo ze-IT ezizothatha izinyanga eziyisithupha ukuze bakwazi ukufundisa abafundi ngamakhompyutha. Uthishanhloko wesikole,uMnuz Sam Makhanya,uthe ujabulela ukuthi lizokwenyuka izinga lemfundo kubafundi basesikoleni sakhe. “Ngijabulela kakhulu ukuthi lo mnikelo uzoza nezinga eliphezulu lokufunda ezinganeni zethu kanti nendawo abazofundela kuyona iyancomeka impela,” kusho uMakhanya.
Isikhulu se-Adapt IT uMnuz S’bu Shabalala,uthe ukuvulwa kwalesi sikhungo sobuchwepheshe kuyindlela yokugqugquzela intsha ukuthi izibandakanye nalo mkhakha. “Ukuvulwa kwe-lab kuzoba yisisekelo sokuthuthukisa umphakathi ngokuwugqugquzela ukuthi uzibandakanye nezobuchwepheshe,okuyingxenye ebaluleke kakhulu ezinhlelweni zethu zokutshala emphakathini ,” kusho uShabalala.
I-Adapt IT ibisebenzisana nenhlangano ebhekelela ukuthuthukiswa kwemiphakathi i-Angel Projects ekuyiyona ezoqinisekisa ukuthi isikhungo esivuliwe siyanakekelwa.
Umsunguli wayo uNkk Brenda Scheepers, uthe bakujabulele ukusebenza kulolu hlelo futhi basazoqhubeka nokulethela ezinye izikole izikhungo ezifana nalesi.
UDkt Thabi Nkabinde,ophuma eMnyangweni wezeMfundo,uthe bayadingeka emphakathini abantu abazokwenza umsebenzi ozovikela isithunzi semfundo esifundazweni. “Uma abafundi bethola izifundo zobuchwepheshe ezisezingeni,bazokwazi ukuqhudelana nabanye abafundi bomhlaba wonkana ngaleyo ndlela bakwazi ukuzakhela impilo ehloniphekile,” kusho uDkt Nkabinde.
Lenziwe lalisha igumbi eliphendulwe isikhungo sobuchwepheshe eZwakele Primary,eMaoti lapho kunikelwe ngamakhompyutha angu-50 nefenisha entsha ceke.Lesi sikhungo besivulwa ngokusemthethweni ngoLwesibili